इँटाको भाउ घट्यो, ४ कोठे घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ? हेर्नु`होस् – Gorkhali Dainik
April 20, 2021 389
इँटाको भाउ दुई महिनाअघिको तुलनामा केही घटेको छ। नेपाल इँटा उत्पादक संघ, बागमती प्रदेश संयो`जक राम`काजी अवालेका अनुसार गत माघको तुल`नामा इँटा प्रतिगोटामा दुई रूपैयाँदे`खि चार रूपैयाँसम्म सस्तिएको छ। अवाले|का अनुसार अहिले आकार हेरेर एक नम्बर इँटा प्रतिगोटा १४ देखि १६ रूपैयाँमा निर्मा`णस्थलमै पुग्छ।
जबकि दुई महिनाअघि यसको मूल्य ढुवानी खर्चसहित १८ रूपैयाँ प्रतिगोटा पर्थ्यो।त्यस्तै दुई नम्बर इँटा अहिले १२ देखि १४ रूपैयाँमा आउँछ। चार कोठाको एक तले घर बनाउँदा इँ`टामा कति खर्च हुन्छ?
हामीले यहाँ कम इँटा प्रयोग गरी कसरी चार कोठे, चिटिक्क`को घर बनाउन सकि`न्छ भन्ने चर्चा गरेका छौं। यसबारे हामी`लाई जानकारी दिएका छन् महाशक्ति इँटा उद्योग, जगाति`का सञ्चाल`क कृष्ण|प्रसाद दुवालले। दुवालका अनुसार इँटा कति लाग्छ भन्ने अनुमान गर्नुअघि सबभन्दा पहिले कस्तो घर बनाउने, कति`वटा झ्याल, ढोका राख्ने निधो गर्नुपर्छ।
Prevआजबाट मेलम्चीको पानी फुल फेजमा काठमाडौँ छोडियो, अब दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यका भित्रिने (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextनेपालीहरूलाई नआत्‍तिन भन्दै भारतमा रहेका दूतावासको यस्तो आग्रह